Please ask for directions if not sure.
Please be careful when crossing the roads.
Please take precautions while travelling during rainy seasons.
Extra towels and socks to cope up with the humid environment
Please ask for permission before you take any photos in case there isareligious programme is on.
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သောနယ်မြေ (မြို့ပြင်) ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သောနယ်မြေ
သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ကန့်သတ်နယ်မြေနေရာများ
(ဉပမာ- အထက်ပေါင်းလောင်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ အောက်ပေါင်းလောင်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနေရာများ)
ပူတာအိုမြို့ (ပမ္မတီး၊ နမ်ရှယ်ကော့၊ မုံငူရ်၊ ဆန်ဒမ်း၊ အထက်ဆန်ဂေါင်၊ ဝါဆန်ဒမ်း၊ ဇီယာဒမ်းကျေးရွာများ)
ဒီမော့ဆိုမြို့ (မြို့ပေါ်နှင့် ဒေါ်ကလော်ဒူကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဒေါကလော်ဒူနှင့် တနီးလာလဲကျေးရွာ၊ ငွေတောင်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ငွေတောင်ကျေးရွာ၊ ပန်ပက်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ပန်ပက်ရွမ်းကူ၊ ပန်ပက် ဆောင်းလူး၊ ပန်ပက်ပယ်မဆောင်၊ ပန်ပက်ကတဲကူနှင့် ပန်ပက်ဒေါကီးကျေးရွာများမှလွဲ၍)
ဖရူဆိုမြို့ (မြို့ပေါ်နှင့် ဒေသအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း CBT စီမံကိန်း နယ်မြေများမှလွဲ၍)
ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်၊ ဒေါတမကြီးကျေးရွာနှင့် ဖရူဆိုမြို့နယ် ထေခိုကျေးရွာများသို့ နိုင်ငံခြားသားများ ခရီးသွားလာပါက ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံရန် မလိုအပ်ဘဲ လမ်းခရီးလုံခြုံရေးအတွက် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကယားပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့သို့ တောင်းခံဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း
နန်းယွန်းမြို့နယ် (မြို့ပြင်နှင့် တိုက်တီး၊ တကား၊ လုံမတ်၊ ကဲဆန်ကျန်းဒုံး၊ လခြမ်း၊ လုံယုန်း၊ ကန်ကော၊ သန်းမန်း၊ ဝါနန်းကျေးရွာများ)
ဗန်းမောက်မြို့နယ် ( အင်းပေါက်၊ ခေါင်းတုံး၊ လေသာ ကုန်း၊ ဘူးတောင်း၊ နန့်အော၊ နန့်ခင်၊ နန့်မား၊ မိုးတေ၊ နားနန့်ထွန်ကျေးရွာများ)
မိုးကုတ်မြို့ (မြို့ပေါ်နှင့် ကျောက်ပြဿဒ်၊ ပန်လင်၊ ဘားနဒ်ကျေးရွာများမှလွဲ၍)
ပြင်ဉီးလွင်မြို့ ( ကျွန်းတိုင်၊ ညောင်ကုန်း၊ သပြေချောင်၊ မိုးကြုးပစ်၊ ပုတီးကုန်း၊ နောင်ပိန်၊ မဲတောကျေးရွာများ)
ဘီးလင်းမြို့ ( တောင်ကြီးကျေးရွာအနီးရှိ ကေလာသတောင်၊ မဲလံကျေးရွာအနီးရှိ ကျောက်ပိဘုရားနှင့် ကျောက်တံခါးစေတီတို့မှလွဲ၍)
သထုံမြို့ ( နန်းခဲရပ်ကွက်ရှိ မြသပိတ်စေတီတို့မှလွဲ၍)
သံဖြူဇရပ်မြို့ (ဝဲကလိရေပူစမ်း၊ ပငဆားကွင်း၊ သေမင်းတမန်ရထားလမ်းပြတိုက်၊ မဟာမိတ်စစ်သင်္ချိုင်း၊ ကျိုက္ခမီရေလယ်ဘုရား၊ စက်စဲကမ်းခြေတို့မှလွဲ၍)
ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော (တောင်ပြိုလက်ဝဲ)၊ ပလက်ဝ၊ စစ်တွေ (IDP)camp ၁၅ ခု၊ ရသေ့တောင် (IDP)camp ၄ ခု၊ ပေါက်တော (IDP)camp ၄ ခု၊ ကျောက်တော် (IDP)camp ၁ ခု၊ မြေပုံ (IDP)camp ၁ ခု၊ ကျောက်ဖြူ (IDP)camp ၁ ခု၊ ရမ်းဗြဲ (IDP)camp (၁) ခု။
ပန်ဆန်းမြို့နယ် (အထူးဒေသ- ၂)
မိုင်းမောမြို့နယ် (အထူးဒေသ- ၂)
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) ဆီဆိုင်၊ လွိုင်လင် (မိုင်းပွန်)။
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) မိုင်းငေါ့၊
မိုင်းလုံ၊ ချင်းရွှေဟော်၊ ဟိုပန်၊ နမ့်တစ်၊ ပန်လုံ၊
မော်ထိုက်၊ မူဆယ်၊ နမ့်ခမ်း၊ ကွတ်ခိုင်၊ မန်ကန်။
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) မိုင်းခတ်၊
မိုင်းယန်း (မိုင်းပေါက်)၊ မိုင်းလား၊ မိုင်းပျဉ်း
(တုံတာ)၊ မိုင်းဖြတ်၊ မိုင်းယောင်း (မိုင်းယု)။
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) လင်းခေးမြို့နယ်၊ ဟိုမိန်းမြို့၊ မိုးနဲမြို့နယ်၊ ကျိုင်းတောင်းမြို့၊ မိုင်းနောင် မြို့၊ မိုင်းစံမြို့နယ်၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ်(ဆီလူး/ မိုင်းဖျန်မြို့) မိုင်းဆတ်မြို့နယ် (ဝမ်ဟုန်/ ဆီဟုတ်/ မိုင်းယွန်း)၊ မိုင်းတုံမြို့နယ် (ပုံပါကျင်/ ဟွေအော/ မုံးကျွတ်/ မုံးထ)၊ မိုင်းတွမ်းမြို့နယ်၊ နားယောင်းမြို့။
နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များ ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သောနယ်မြေများ (ကန့်သတ်ဒေသများ)သို့ သွားရောက်ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံခြင်းမပြုရန် မှတ်ချက်ရှိပါသည်။